10 Goobaha Ganacsi Bulsho ee Lagu wado Gawaarida Dukaanka | Martech Zone
10 Goobaha Ganacsi ee Bulsheed ee lagu kaxeeyo taraafikada Bakhaarka
Isniin, Oktoobar 28, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Marka ay timaado wadista taraafikada, waxaa jira goobo badan iyo adeegyo horeyba u jiray gaar ah dhagaystayaasha aad isku dayayso inaad la xiriirto. Waan hubaa inaad horeyba u maqashay qaar ka mid ah goobaha ganacsiga bulshada waaweyn sida Groupon iyo Nolosha Bulshada - laakiin waxaa jira kuwa badan oo ku soo kordhay caan. Qaarkood waxay qaas u yihiin alaabada raaxada, ama lala beegsanayo Hooyooyinka, kuwa kale waxay kaliya isku dayayaan inay ka helaan waxa ku xiga ee qabow magaaladaada. Tayada xulashada wargeysyadan ama dalabyada ayaa ah waxa iyaga ka dhigaya inay cunaan dhagaystayaashoodu waxayna ka caawineysaa inay caan ku qarxaan.
Tafaariiqleyda doonaya inay kaxeeyaan taraafikada maxalliga ah, waxay noqon karaan fursadda ugu fiican ee aad ku wadi karto taraafikada dukaamada, iibka khadka tooska ah - iyo gaar ahaan muuqaalka gobolkaaga. Waa kuwan tusaalooyinka 12 ee bogagga qaarkood. Ma haysaa wax intaa ka badan La wadaag iyaga faallooyinka iyo sidoo kale natiijooyinka aad ku heshay iyaga. Maskaxda ku hay in badankood kuwani ay yihiin fursado badan oo wax iibsi ah oo aad si qiimo leh ugu dhimayso adeegyadaada si aad taraafikada u wado.
Fab.com - Ma tahay naqshadeeye, alaab-qeybiye ama soo saare naqshad weyn?
Daaro waxay bixisaa hal heshiis oo maxalli ah oo aan la diidi karin maalin kasta. Kaydintooda waxaa sidoo kale loo bixin karaa sidii Foojarro Hadiyado oo la habeeyay.
Gilt City waa goob nololeed oo internetka ah oo lagu daaweeyo waaya-aragnimada ugu fiican magaalooyinka ugu waaweyn adduunka. Waxaan bixinnaa adeegyo gaar ah, hal nooc oo nooc ah-oo ay kujiraan cunnooyin, madadaalo, qurux iyo fayoobaanta-liiskayaga sii kordhaya ee xubnaha.
Groupon wuxuu isku xiraa iibsadayaasha iyo iibiyeyaasha iyada oo loo marayo qiime iyo daah-fur. Haddii aad makhaayad tahay, lacag-bixin Xifdiyay - shirkad Groupon ah.
Nolosha Bulshada waxay ka caawisaa ganacsiyada maxalliga ah inay helaan oo ay sii hayaan macaamiil badan.
Degmada Plum waa madal e-commerce ah iyo hanti warbaahineed oo si adag diiradda loogu saaray Hooyooyinka iyo baahidooda.
Polyvore waa madal daaweyn iyo soo saarid soo saarid ah. Xubnuhu waxay gashadaan badeecada iyo sawirrada asalka iyada oo loo marayo Qalabka Clipper ama Button Polyvore. Muuqaaladan ayaa markaa laga heli karaa Polyvore si loo abuuro nuxurka iyo helitaanka isticmaalaha.
ScoutMob wuxuu isku xiraa dukaameystayaasha sida ugufiican ee alaabada si madax banaan loo sameeyo iyo waliba sheekooyinka iyo aragtida u horseeday abuuristaas nolosha.
Thrillist - Maalin kasta oo isbuuc ah, Thrillist waxay hoos dhigeysaa macaamiisheeda talooyin ay tahay inay leeyihiin, laga soo bilaabo waxa ugu wanaagsan waxa cusub, illaa wanaagga radar-hoosaadka. Xaqiiqdii waa inaad noqotaa mid gaar ah si laguu soo bandhigo - laakiin aad ugu qalanto dadaal! Waa kuwan tusaale wanaagsan:
Dukaan Meeshaada - Gaadho dhagaystayaal aad u tiro badan isla markaana soo jiito macaamiil cusub adoo siinaya heshiisyo waqtiga-dhabta ah si aad udhaqaajiso tira-koob xad-dhaaf ah una buuxiso waqtiyada ballanta!
Tags: daboolidfabfab.comgiltcitygoogle ayaa bixisakooxku nool bulshodegmada plumPolyvorescoutmobfarxadbiyo baxa
Suuq-suuq: Muuqaal Maxalli ah oo ku saabsan Ganacsiga Qaranka